२० महिनाकी बालिकाले ५ जनालाई नयाँ जीवन दिएर संसार छोडिन – Wow Sansar
January 15, 2021 134
आशिषले अगाडि भने ‘हाम्री छोरी ब्रेन डेड भइसकेकी थिइन् । मैले डाक्टरसँग हामीले छोरीका अंग दान गर्न सक्छौं कि भनेर सोधें । डाक्टरले हामीले यस्तो गर्न सक्ने बताउनुभयो । म र मेरी पत्नीले अरु बालबालिकाको ज्यान बचाउनको लागि हाम्री छोरीलाई गाड्नुको सट्टा उनको शरीर दान गर्ने निर्णय गर्यौं । कम्तीमा हामीलाई यो कुराको सन्तुष्टि त हुन्छ कि हाम्री छोरी अब उनीहरुमा जीवित छिन् ।’सर गंगाराम अस्पतालका अध्यक्ष डा. डीएस राणाले भने ‘मस्तिष्कबाहेक धनिष्ठाका सबै अंगले राम्रोसँग काम गरिरहेका थिए ।
मातापिताको मन्जुरीपछि उनको मुटु, मृगौला, कलेजो र दुवै कर्निया अस्पतालमै प्रिजर्भ गरिएका थिए । उनका दुवै मृगौला एकजना वयस्कलाई, मुटु र कलेजो दुई अलग अलग बच्चाहरुलाई दिइयो । कर्नियालाई अझै पनि सुरक्षित राखिएको छ जो दुई जनालाई दिइनेछ । यसरी धनिष्ठाले ५ जनालाई नयाँ जीवन दिएकी छिन्
Prevसाथीको गुण्डा टाइपको माया !!! दुवै साथीको एउटै केटीवाट वच्चा जन्माउने चाहना ।
Nextपुन: एकाएक चर्चामा आयो करण-फराह सम्बन्ध !
सलमान खानको बर्थडे केक काट्न पुगे भुवन केसि, सुष्मा कार्की र प्रशान्त तामाङ
टोखामा इन्जिनियर श्रीमतीले श्रीमानको ज्या’न लि’इ’न्, आफुले पनि गरिन् देह त्याग !
कपाल पातलो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? कागतीको रस कपालको हरेक समस्याको समाधान !